Lithium Na-ebupụta Ihe Dị Oké Mkpa Banyere Social | Martech Zone
Lithium amalitela usoro vidio dị egwu na microsite ọhụrụ, Gbalịsie Ike Banyere Social ka ha nwee obi uto na Social Media wee nye ụfọdụ akwụkwọ akụkọ na-enye ihe ọmụma iji nyere ụlọ ọrụ aka usoro atụmatụ mgbasa ozi ha. Ihe sokwa ya bụ a nyocha onwe. Vidio ahụ gụnyere:
ahịa Ọrụ na Social Media
Kedu Mmasị nwere njikọ na nsonaazụ azụmaahịa
na Lithium na-etinye nwambaIme ndị ụlọ ọrụ na-achị nwamba ihe ọchị
Lithium ọ jiri nwamba mee ihe ọchị maka ụlọ ọrụ na-ebugharị usoro mgbasa ozi mmekọrịta na nwamba?
On a side note… Echere m na m na-arụ ọrụ na ọtụtụ n'ime ndị na-agụ akụkọ ndị a videos.
Tags: dị njọnweta akwa vidiyolithium
Everypost: Otu Mobile App na-ebipụta N’ebe nile
2013 B2B Ọdịdị Mgbasa Ọdịnaya